A/Hayeen Ku Xigeenka Barlamaanka Yaa U Gacan-Qaaday? - Xogtashacabka.com
Search...	Home About us Contact us A/Hayeen Ku Xigeenka Barlamaanka Yaa U Gacan-Qaaday?
Published on Monday, 29 July 2013 12:28	Xogta Shacabka (Jigjiga) Af-Hayeen Ku Xigeenka Baarlamaanka Kililka 5aad Cabdi Cabdilaahi (Cabdi-UBO) ayaa la sheegay inu warqad cabasho ah u gudbiyay Xafiiska Cabashooyinka Xukuumada DDS, kadib markii meel fagaare ah loogu gacan qaaday todobaadkii hore isla markaana an laba Cali ka wada hadlin ciddii u gacan qaaday, iska daa sharci la hor keenee.
Af-hayeen ku xigeenka oo ay wada joogeen Maxamed Suldaan Bade kana soo wada jeedaan dagmada Qabri-Bayax ayay u gacan qaadeen niman cadhaysan oo ka soo jeeda dagmada Araarso. Inkastoo saxaafadu ka hadashay gacanta soo gaadhay Maxamed Suldaan Bade iyo nin kale oo isna qurbajoog ah laguna magacaabo Maxamud Dayib maadaama ay dhalasho dibadeed haysteen, waxaa la yaab noqotay in la duudsiyo gacantii ku dhacday Af-hayeen Ku Xigeenka Baarlamaanka Dagaanka.
Ilo lagu kalsoonyahay sida ay noo sheegeen Cabdi-UBO ayaa Xafiiska Cabashooyinka ka codsaday in baadhitaan lagu sameeyo cida ka danbaysey gacanta ku dhacday iyo cida booliska ka sii daysey kuwii gacanta lahaa ee is hor taagtay in sharciga la hor geeyo. Sidoo kalne si dag dag ah sharciga loo hor keeno ninkii u gacan qaaday.
Af-Hayeen ku xigeenka iyo labada nin ee qurba joogta ah ayaa ka soo wada jeeda dagmada Qabri Bayax ama Abasguusha Galbeed, waxaana u gacan qaaday koox ka soo jeeda dagmada Araarso ama Abasguusha Bari.